Football Khabar » बार्सिलोनाले च्याम्पियन्स लिग जित्ने सम्भावना कति ? यसो भन्छन् मेस्सी
बार्सिलोनाले च्याम्पियन्स लिग जित्ने सम्भावना कति ? यसो भन्छन् मेस्सी
स्पेनिस बार्सिलोनाले सन् २०१५ मा ट्रिबेल उपाधि जितेयता पुनः युरोपको सबैभन्दा ठूलो च्याम्पियनस लिग फुटबलको उपाधि जित्न सकेको छैन । यी चार वर्ष लगातार बार्सिलोना फाइनल नपुगी आउट भएको छ । जबकि, सोही अवधिमा बार्सिलोनाको खास प्रतिस्पर्धी रियल मड्रिडले ह्याट्रिक नै हान्यो भने गत सिजन इंग्लिस क्लब लिभरपुलले जित्यो । बार्सिलोना सेमिमा लिभरपुलसँगै हारेको थियो ।
जारी सिजन बार्सिलोना यो उपाधि जितेर गुमेको युरोपियन उपाधिको शान क्याम्प नोउमा फर्काउने दाउमा छ । बार्सिलोनाले हालै नयाँ प्रशिक्षक क्विके सेटिनलाई नियुक्त गरेपछि धेरैले बार्सिलोना थप बलियो हुन सक्ने बताएका छन् । समर्थकहरू थप आशावादी बनेका छन् ।
यसैबीच, कप्तान लिओनल मेस्सीले हालै एक अन्तर्वार्तामा कुरा गर्दै च्याम्पियन्स लिगलाई प्रमुख लक्ष्य बनाउनुपर्ने बताएका छन् । तर, ला लिगा छाड्न नसकिने पनि उनले बताएका छन् । उनले आफूले व्यक्तिगत रूपमा थप एक च्याम्पियन्स लिग जित्न चाहेको बताए । ‘व्यक्तिगत रूपमा म थप एक च्याम्पियन्स लिग जित्न चाहन्छु, म यो प्रतियोगिता पाँचपटक जित्न चाहन्छु,’ उनले भनेका छन् ।
मेस्सीले अघि थपे, ‘हाम्रा लागि ला लिगा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ, च्याम्पियन्स लिग विशेष छ । हामी यी दुईमध्ये कुनै एक होइन, दुवै जित्न चाहन्छौं,’ मेस्सीले भने, ‘तर, यसपटक हाम्रो प्रमुख लक्ष्य च्याम्पियन्स बन्नुपर्छ । किनभने, हामीले ला लिगा पटक–पटक जितेका छौं तर युरोपियन उपाधि नजितेको चार सिजन भयो ।’
मेस्सीले च्याम्पियन्स लिग जित्न सजिलो नरहेको पनि बताए । पछिल्लो समय इंग्लिस क्लब शक्तिशाली बनेर आएकाले यो प्रतियोगिता थप कठिन बनेको मेस्सीले बताए । ‘च्याम्पियन्स सबै जित्न चाहन्छन् । किनभने, यसको शान ठूलो छ । तर, यो प्रतियोगिता जित्न ज्यादै कठिन छ,’ मेसीले भने, ‘बार्सिलोनाका लागि यो सधैं विशेष हो । यसपटक हामी यो सुन्दर उपाधि जितेर फ्यानहरूमा खुसी फर्काउन चाहन्छौं ।’